भारतमा कोरोना कहर: फेरि बन्यो नयाँ रेकर्ड ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः भारतमा २४ घण्टामा हालसम्मकै बढी संक्रमित र मृतक थपिएका छन् ।
भारतमा बिहीबार एकैदिन ९ हजार ८३८ जना संक्रमित थपिँदा २७४ जनाको मृत्यु भयो । जुन अहिलेसम्मकै बढी हो । यसअघि बिहीबार बिहानसम्म ९ हजार ६३८ जना संक्रमित थपिएका थिए । बुधबार बिहानसम्म त्यतिन्जेलको सबैभन्दा बढी संक्रमण भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस मुम्बई तथा दिल्लीवाट नेपाल फर्किएकामा संक्रमण बढी
यसअघि सोमबार बिहानसम्म गएको २४ घण्टामा ८ हजार ७५० जना नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । त्यो संख्या सबैभन्दा बढी रहेको थियो । त्यो रेकर्ड फेरि तोडिएको छ ।
त्यसअघि गएको शनिबार सर्वाधिक २६९ को ज्यान गएको थियो । बिहीबार बिहानसम्म २५९ जना थपिएका थिए । बुधबार २२१ जना र मंगलबार २०१ जना थपिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस ट्विटरका संस्थापक डोर्सेले कोरोनाविरुद्ध लड्न १ अर्ब डलर सहयोग गर्ने
शुक्रबार बिहान ८ बजेसम्म भारतमा कोरोनाबाट २ लाख २६ हजार ७१३ जना संक्रमित भएका छन् । १ लाख ८ हजार ४५० जनालाई निको भएको छ ।
मृतकको संख्या ६ हजार ३६३ पुगिसकेको छ । संक्रमितको संख्या २४ घण्टामा बढ्दा भने विश्वमै भारत तेस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोभिड–१९ः नेपालको लागि अवसर हुनसक्छ
विश्वमा हालसम्म ६६ लाख ९८ हजार ३७० संक्रमित पुग्दा ३ लाख ९३ हजार १४२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशः
भारतको कुन राज्यका कति ?
ट्याग्स: Corona India, काेराेना भाइरस, भारत